The Ab Presents Nepal » जेठ ९ गते, शुक्रबारको राशिफल सगै बुढानिलकन्ठको दर्सन गरौ सोचेको पुग्ने छ ।
जेठ ९ गते, शुक्रबारको राशिफल सगै बुढानिलकन्ठको दर्सन गरौ सोचेको पुग्ने छ ।
वि.सं.२०७७ साल जेठ ०९ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०२० मे २२ तारिख । नेपाल संवत् ११४०
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) प्रलोभनमा पारेर आफ्नैहरूले रुपैयाँ पैसा लान सक्छन् ध्यान दिनुहोला । व्यापार मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । प्रणय सम्वन्धमा चिसोपनको विकास हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । कुटुम्व तथा आफन्तसँग कुनै पनि काम गर्दा ध्यान दिनुहोला पछि आर्थिक कुरामा राय बाजिने तथा मनमुटाव सिर्जना हुन सक्छ । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) प्रविधिको प्रयोग गरि पढाइ लेखाइमा राम्रो प्रगति गरि सफलताको मार्गमा अगाडि बढ्न सकिनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय राम्रो रहेकोछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) काम गर्दा सावधानि अपनाउनुहोला खराब ब्याक्तिको विश्वास गर्नाले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुनाले अरु भन्दा पछि परिनेछ भने माया प्रेममा एक अर्काबीच बैमनस्यता बढ्नेछ । घर भित्रकै मानिसहरुबाट धोका हुने सम्भावना रहेकोले सचेत रहनुहोला । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने ग्रहयोग रहेको छ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने तथा नया ठाउबाट प्रेम प्रस्ताब आउनेछ । इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न सकिनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धित सामानको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) पारिवारिक माहोलमा मिष्टान्न भोजन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । घरायसि कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुने हुनाले थप काम गर्न जोस जाँगर बढेर आउनेछ । पैत्रिक धन तथा सम्पतीको प्रयोग गरि धन कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गर्न सकिनेछ । तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्नुहोला ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) काम बिग्रने तथा मान सम्मानमा आघात पुग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । पढाइ लेखाइ तपाई आफ्नै कारणले बिग्रनेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर चासो रहेपनि गलत व्यात्तिहरुले प्रयोग गर्न सक्छन् ध्यान दिनुहोला । यात्रा गर्दा विशेष ख्याल गर्नुहोला समस्या आउन सक्छ । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) कुटुम्ब तथा आफन्तसँगको आर्थिक कारोबार बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । मनोबल कमजोर हुने हुनाले बाहिरि तत्वहरुले प्रभावित पार्नेछ । अध्ययनमा ध्यान जाने छैन भने कार्यक्षेत्रमा काम बिग्रने तथा तपाईको आलोचना गर्नेहरु बढ्नेछन् । पुराना समस्याहरु पुनह आइलाग्ने तथा सत्रुहरुले दुख दिनेछन् । यात्रा गर्दा विशेष ख्याल गर्नुहोला दुख हुने अधिक सम्भावना रहेकोछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछि अग्र स्थानमा आउन सकिनेछ । दाम्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगि बढ्न सकिनेछ भने माया प्रेम गर्नेहरुले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय व्यातित गर्दा खुसी भएको महशुस गर्नेछन् । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धित सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) पढ्ने लेख्ने काममा अरुलाई पछाडि छोड्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । पुराना समस्याहरुबाट छुट्करा पाइने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । स्वास्थ्य आफ्नै काबुमा हुने हुनाले नयाँ-नयाँ काम गर्न सकिनेछ । तपाईसँग मनमुटावको भावना राख्ने तथा सत्रुता साध्नेहरु आफै कमजोर हुनेछन् । तरपनि काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) सुधारात्मक क्षेत्रमा गरिएको लगानी त्यसै खेर जानेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा अलि बढी समय दिए सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानीबाट सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ । प्रेम गर्ने जोडिहरु आज टाडै बस्नु उचित छ माया प्रेममा धोका हुन सक्छ । खानपानमा एकदमै ध्यान दिनुहोला पेट सम्बन्धि समस्या आउने ग्रहयोग रहेकोछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) माया प्रेममा अविश्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परिवारमा आमासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ । अन्य काममा व्यास्त हुँदा पढाइ लेखाइ कमजोर रहनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् । समाजसेवामा नाम कमाउन अलि बढी नै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) साथीभाइको सहयोगले राम्रै सहयोग जुटाउन सकिनेछ । विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । परिवारजनका आकांक्षा तथा इच्छाहरु पुरा गर्न सकिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
प्रकाशित मिति May 22, 2020
जी न्युजका प्रधान सम्पादकले मागे नेपालीसँग माफी।#gobackindia
भारतीय मिडियाले नेपाल र नेपालीलाई अपमान गर्यो, गोदी मिडिया बहिस्कार गरौं – गगन थापा
एमसीसी पास गर्न सहयोग गरे पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने प्रस्ताव ।
यि भगवानको दर्शन गर्दै आज असार २६ गते, शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस,सोचेको काम बन्ने छ।
नेपालले केहि गर्न सक्दैन भन्दै हेप्ने भारतलाइ दरो झापड “भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोकियो”
प्रधानमन्त्री ओली र देश विरुद्ध भारतीय मिडियाको घृणित आरोप कदापी स्वीकार हुदैन–कांग्रेस नेता गुरुङ
खुसिको खबर,नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोक्ने निर्णय सक्दो सेयर गरौ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा माइतिघरमा भोली हुने बृहत प्रदर्शनमा सम्पूर्णलाइ सहभागीको लागि अनुरोध !एक सेयर गरि सहभागी बनौ !
सडकमा जुलुस निकाल्ने भए लकडाउन किन प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि जनता स्वःस्फूर्त सडकमा आएका हुन् मैले बोलाएको हैन :ओली
बुढानिलकन्ठको दर्शन गर्दै आज असार २५ गते, बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस ।
सार्वजनिक भएको छोटो समयमै चर्चाको शिखरमा चक्र बमको “ओए काजल” भिडियो सहित
सुपादेउरालीको दर्शन गर्दै असार २४ गते, बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस र भाग्य बदल्नुहोस ।